Fanentanana hiala amin’ny kaonty Twitter an’ny Lenta.ru · Global Voices teny Malagasy
Fanentanana hiala amin'ny kaonty Twitter an'ny Lenta.ru
Voadika ny 10 Avrily 2019 3:30 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Aprily 2014)
Fango vaovaon'ny @lentaofficial. Le nouveau logo de @lentaofficial.
Fantatra fa niala ny saika atsasan'ny ekipa mpanoratra tao amin'ny vavahadim-baovao lehibe an'ny RuNet, Lenta.ru [vakio ny lahatsoratra Global Voices, amin'ny teny frantsay] noho ny fanovana ny lalana ara-politika. Tsy nohavaozina intsony araka izany ny kaontiny Twitter ofisialy. Herinandro vitsy taty aoriana, ny 1 aprily, nahitana sioka toy izao tao:
Nangataka taminay mba hanoratra zavatra eto ireo olona mahalala fomba izay misahana ny fanoratana ao aminay. Saingy kamo izahay (ツ)
Toa maka tahaka ny endrika hatsikana ao amin'ny @lentaruofficial orizinaly (izay zatra manoratra amin'ny teny rosiana hoe “inona ny vaovao ry zareo?” isan'andro) ny sioka sy ny mariketsipo miaraka aminy. Mikasika ireo “olona mahalala fomba” indray dia fomba fiteny ankolaka hanondroana ireo miaramila Rosiana tsy fantatra hita feno manerana an'i Crimée tato anatin'ny herinandro vitsy. Taty aoriana, nanazava ny sioka iray hafa fa nahita ny sata maha-kaonty voamarina i @lentaruofficial
Miarahaba! nahita ny satan'ny kaonty maha-ofisialy azy ny adiresy Twitter Lenta.ru. @lentaruofficial
Mpampita vaovao teo aloha tao amin'ny Lenta.ru, Ilya Aza, nisioka[ru] fa “sahirana” ny adiresy vaovao @lentaruofficial ary niezaka naka tahaka ny endriky ny Lenta teo aloha. Nilaza ihany koa izy fa tsy misahana kaonty Twitter mifandray amin'ny Lenta.ru izy sy ny mpiara-miasa aminy. Nanomboka fanentanana madinika mba handrisika ireo mpiserasera hiala ao amin'ireo “matoatoa” mpisoloky ireo mpanjifa marobe ao amin'ny @lentaruofficial, nikomy noho ny zavatra hitan'izy ireo fa fisolokiana. Nisioka ny mpiasa iray teo aloha tao amin'ny Lenta hoe:
Aza manaraka ny lentaruofficial, tsy izahay no ao, fa olona kanosa tsy mahay afa-tsy ny manimba izay mandeha tsara.
Maro ireo mpiserasera nitatitra[ru] fa manam-pahaizana momba ny haivarotra amin'ny media sosialy tonga tao amin'ny Lenta.ru niaraka tamin'ny lehiben'ny tonian-dahatsoratra vaovao no nitantana ilay kaonty vaovao. Lasa lavitra ilay mpiray tanindrazana [talen'ny fampielezan-kevitr'i Alexeï Navalny Leonid Volkov teo aloha ] ary nilaza fa tsy maintsy atao izay hanalàna ity kaonty Twitter ity:
Aza adino ny miala ao amin'ny @lentaruofficial ary manambara izany ho spam. Mpibodo ireo.
Manamafy ny kaonty ofisialin'ny TV Dojd hoe:
Voalohan'ny volana isika izao. Aza adino ny mividy ny tapakilanao amin'ny fiara fitaterana iombonana, mandoa ny saran'ny aterineto, mamahana ny saka ary miala amin'ny @lentaruofficial.
Nahazo vokatra ny fanentanana hiala amin'ny @lentaruofficial, saingy tsy dia misongadina. Tao anatin'ny efatra andro, olona teo amin'ny 10 000 teo no nijanona nanaraka ny kaonty. Nanomboka ny 4 aprily, tsy nitombo intsony ny isan'ireo mpanjohy fa nijanona ho 230 000. Ho an'ireo mpiserasera 10 000 nandray anjara tamin'ity hetsika ity, azo sokajiana toy ny fanampiny ao amin'ny tontolon'ny bilaogy rosiana mandray anjara am-pivitrihana ara-politika izany.
Isan'ireo mpanaraka ny @lentaruofficial tao anatin'ny andro vitsy lasa. Pikantsarin'ny tranonkala twittercounter.com